जसले बालबच्चाको पेट पाल्न कपाल मुण्डन गरी १५० रुपैयाँमा बेचिन ! « गोर्खाली खबर डटकम
जसले बालबच्चाको पेट पाल्न कपाल मुण्डन गरी १५० रुपैयाँमा बेचिन !
छोरा-छोरीको माया सबैभन्दा बढी आमालाई नै हुन्छ । आफ्ना छोरा छोरीको खुशीका लागि जस्तोसुकै परिस्थितिको सामना गर्न तयार हुन्छिन्–आमा ।
बालबच्चको भोको पेट देख्न नसकेर एक आमाले आफ्नो कपाल मुण्डन गरी १ सय ५० रुपैयाँमा बेचेको समाचार अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ ।
घटना भारतको हो । तमिलनाडुकी एक विधवा महिलाले आफ्ना बालबच्चको पेट भर्नका लागि कपाल मुण्डन गरी बेचेकी हुन् । उनले आफ्नो कपाल बेचर आएको पैसाले भोकाएका बालबच्चालाई खाना खुवाएकी हुन् । उनले दैनिक समस्यासँग गुज्रिनुभन्दा प्राण त्याग्ने मनसाय पनि नबनाएकी होइनन्, तर बालबच्चाको मायाले यसो गर्न सकिनन् ।
तमिलनाडुको समेममा बस्दै आएकी ३१ वर्षीया प्रेमा नाम गरेकी ती महिलाका तीन सन्तान छन् । एउटा पाँच वर्ष, अरु ३ र २ वर्षका छन् । उनका पतिको भने सात महिना पहिले मृत्यु भएको थियो । ऋणको बोझ उठाउन नसकेपछि उनका पतिले आत्महत्या गरेका थिए ।
उनले बालबच्चाको पेट पाल्नका लागि छिमेकीहरुसँग ऋण पनि खोजेकी थिइन् । तर, कसैले ऋण नदिए पछि अन्नतः आफ्नै कपाल बेच्न बाध्य भएको जनाइएको छ ।
एक दिन त कपाल बेचरे बच्चालाई खाना खुवाइन तर भोलि फेरि के गर्ने भन्ने पिरलोले उनले आत्महत्या गर्ने निधो गरेकी थिइन । जसका लागि उनी विष किन्न पसलमा समेत पुगिन तर, पसलेले शंका लागेपछि उनलाई दिएनन् ।
खबर बाहिरिएपछि एक ग्राफिक डिजाइनरले उनको मद्दतका लागि सार्वजनिक अपिल गरेका थिए । जसबाट १ लाख ४५ हजार फण्ड जम्मा भएको थियो । उक्त रकम ती महिलाई प्रदान गरिएको छ । यसका साथै सलेम जिल्ला प्रशासनले समेत विधवा भत्ता पनि ती महिलाई प्रदान गरेको जनाइएको छ ।
खुशीको खबर : सशस्त्र प्रहरीमा नयाँ भर्ना खुल्यो, ८ पासले पनि आवेदन दिन पाउने, ( हेर्नुस् विज्ञापनसहित)
ब्राजिल पुग्यो कोपा अमेरीकाको सेमिफाइनलमा